Esi hazie oku mberede na ekwentị gị | Gam akporosis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Nche, Nkuzi
Chọpụta na anyị niile nwere a na kọntaktị na-amalite site «AA» na anyị ama burukwa. Ekwu jikọrọ ndị dị mkpa na anyị burukwa. Nke a bụ ihe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile mere iji mee ka kọntaktị ndị a họọrọ ka ha pụta n'elu ebumnuche anyị. Na nke ahụ Ejiri ya, ọ bụrụ na ihe mberede ma ọ bụ ihe mberede, ha nwere ike ịkpọtụrụ onye gosipụtara na-eji ekwentị anyị.
1 Ndi ana-akpo "AAA" + aha adighizi enwe ezi uche.
2 Tọọ nọmba oku mberede na ekwentị akpọchi.
Ndi ana-akpo "AAA" + aha adighizi enwe ezi uche.
Ma mgbochi a nke jere anyị ozi oge ụfọdụ agafebeghị. Gbakwunye na kọntaktị anyị tụkwasịrị obi "AAA" n'ihu aha adịghịzi enwe ezi uche. Ma ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị nile nyere ndụmọdụ na mkpọsa site na otu Red Cross. Ọ naghị eme ọtụtụ ihe ọzọ.
Na ọnụ anyị na-eji taa ọ naghị eme nnukwu ihe ịme kọntaktị na mbụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịmeghe ekwentị. Cheedị obere oge anyị hụrụ ka mmadụ na-ada n'okporo ụzọ. Na mgbakwunye na ịnye ndụmọdụ ọrụ mberede dịka ezigbo ụmụ amaala, ọ na-eme anyị ịkpọtụrụ ezinụlọ gị. Iji mee nke a, anyị na-atụtụ ekwentị onye ahụ aja site na ala, mana mgbe anyị chọrọ ịchọ kọntaktị: «tinye usoro mmeghe».
N'inye nke a, anyị enweghị ike ịme obere. Ọ ga-esiri anyị ike ịnweta kọntaktị ekwentị na koodu ma ọ bụ mkpọchi ụkpụrụ. Ma ọ bụrụ na anyị na-edebe, dị n'okpuru isi na-ịme ụkpụrụ, ma ọ bụ nọmba maka koodu ọ na-ekwu «Mberede». Ekwentị, ọbụlagodi na mkpọchi, ga-enyere anyị aka ịkpọ oku mberede. Mana dịka egosiri, ọ ga-enye anyị ohere ịkpọ nọmba ọrụ mberede. Ma gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ka onye òtù ezinụlọ mara?
Taa na Androidsis anyị ga-akụziri gị otu esi ahazi kọntaktị (s) anyị chọrọ dịka nọmba mberede. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịkpọ oku mberede site na ekwentị anyị, ha nwere ike ịkpọ, dịka ọmụmaatụ, onye anyị ma ọ bụ nwunye, ma ọ bụ nne na nna, na-enweghị ịnweta akwụkwọ ndekọ ekwentị nke ọnụ. Kedu?. Nọgide na-agụ ihe.
Tọọ nọmba oku mberede na ekwentị akpọchi.
O di nwute, n'adịghị ka iOS, gam akporo ruo mgbe mbata nke ọhụrụ nke gam akporo ọ nweghị ohere a. Mana ọ bụrụ na ekwentị gị enwetabeghị mmelite echere ogologo oge, anyị ga-enye gị azịza. Ingnweta ntọala nhọrọ nke ekwentị anyị. Site Ntọala anyị na-achọ mkpọchi mkpọchi. Ozugbo n'ime, anyị ga-abanye na ngalaba nke Nche. N'ikpeazụ, anyị na-enweta Ozi onye nwe.
Ozugbo anyị nwere ike eme ka ozi onye nwe ya puta ihe. Na n'ọhịa dị ịbanye ozi a anyị nwere ike itinye nọmba ekwentị achọrọ. N'ụzọ dị otú a, ahọpụtara nọmba ekwentị ga-ahụ mgbe niile na ihuenyo ekpochi ekwentị.. Ya mere ọ bụrụ na mmadụ ahụ ekwentị anyị, ọ nwekwara ike inyere anyị aka ịkpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ onye nwe ya.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị smartphones-echebe anyị onwe data na ndị ọzọ ịnụ ọkụ n'obi. Maka nke a anyị nwere ọtụtụ ụdị mkpọchi. Apụghị ụkpụrụ patterned nakawa etu esi, alphanumeric Koodu, na ugbu a mkpisiaka kwa. Ọ bụghị banyere ihe bụ ihe ọzọ, iris agụ ma ọ bụ ọdịdị ihu ude. Ihe a niile dị mma iji chekwaa data anyị. Mana site n’oge ruo n’oge ọ dị mma iche na oge ụfọdụ anyị nwere ike ịchọ onye ga - eji ekwentị anyị nyere anyị aka.
Enwere ọtụtụ ngwa egwuregwu nke na-enyere anyị aka ilekọta onwe anyị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile nwere ụfọdụ ihe metụtara ahụ ike nke arụnyere na ngwaọrụ anyị nke anyị na-eji iji chekwaa data. Ma ọ bụ ọbụna iji chọpụta mgbaàmà ma ọ bụ tinye ọgwụgwọ. Ma Ọ bara uru itinye ndụmọdụ ndị a na akaụntụ ka ekwentị anyị wee na-enyere anyị aka na mberede.
Ọ bụrụ na ama ama gị arụnyere ụdị gam akporo 7.0, ị nwere ike hazie nọmba mberede. Ya mere, onye ọ bụla hụrụ ekwentị gị nwere ike ịkpọ oku na nọmba nke anyị ahaziri na mbụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka iji mee ka kọntaktị a na-ahụ anya na ha nwere ike ịgakwuru na mberede ma ọ bụ ọnwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Esi hazie oku mberede na ekwentị gị
Meizu M5s dị njikere ka ekpughere ya n'izu na-abịa